Iimfihlelo iKrismesi, na kraca umdlalo slot entsha yenzelwe ezineempawu eziya ngephanyazo ukuseta sikandim iKrismesi. Imizobo nomgangatho ziyaxhonywa, lo mdlalo slot iye yaphononongwa ngobunjineli, kunye Gameplay emangalisayo kunye neempawu eliphezulu win. Segments ulayishiwe kunye aziyeki ivideo phawu ukuze abadlali onwabele ndize ndoyise ezininzi kulo. Yiya phambili kwaye ukubhiyozela ixesha ayithandayo konyaka lo mdlalo slot entle.
Kunye ibhonasi osemqoka ngumvuzo kakhulu, kukho ezininzi kokuphumelela ukuba ukujija bhobhile kunene ngale zokubeka game IKrismesi-themed. Playable kuzo zonke izixhobo ezahlukeneyo, esi umdlalo slot umdla icons emangalisayo phezu macwecwe slot; le Umdlalo u ukothuswa iKrismesi ukuze abadlali ukuba ukuphumelela. Abangaboniyo umdla kwaye ebonisa indawo Gameplay kwamnandi, kukho osemqoka obuninzi eyenza ukuba lo mntu kufuneka-umdlalo.
Malunga umphuhlisi Weemfihlelo iKrismesi
Iimfihlelo iKrismesi ziqulunqwe NetEnt eyaziwa umgangatho imidlalo baphuhlisa. Ziye wadala Nentabalala imidlalo yongcakazo ngamnye nemizobo ezisemgangathweni sele kuthakazelelwa ngenxa Gameplay yaneempawu. Bona elinye lamagama ezaziwayo kushishino iGaming ukuba sizama ukunika abadlali ngawona mava.
Nazi 5 namacwecwe kunye 25 paylines ukuze abadlali ukudlala kunye kwaye ubukhulu nengqekembe iyahluka ukusuka 0.25 ukuze 125.00. Beka ibhanti lakho uze ucofe kwi ekuqaleni iqhosha ukujija bhobhile, ixesha ngalinye emazweni mdlali iisimboli ezithelekisekayo, khona apho kuya kubakho umvuzo ezayo indlela yakho. Umdlalo Ikwaziimpawu aziyeki ivideo, kwimijikelo ibhonasi kunye nangaphezulu ukuze abadlali ukuphumelela eyona.
WeKrismesi intsimbi mqondiso ohlawula kwaye ndokuhlawula ukuya 1250 amaxesha ubungakanani bet. The Santa zasendle eya endaweni neminye imiqondiso ukugqibezela imixube ziwongwe uyaphumelela ukuba ilizwe zasendle ziza kuba ngaphezu. Sasaza kwelinye icala bubonakaliswe wengxowa zokudlala eya ukuvula aziyeki abakhululekileyo rounds ibhonasi. Ukwenza inkoliso iisimboli eziphakamileyo ohlawula kunye neempawu ukuphumelela eyona.
Beka ukubheja kwakho, ukujija bhobhile uze udlale Iimfihlo iKrismesi apha Top Slot Site Casino. Lumkelani sasaza, imiqondiso zasendle, kunye neminye imiqondiso ezikhethekileyo ukuphumelela ngakumbi zonke olusukela.
Blackjack Single Ikhadileeck Touch